Wiil doonaya in uu iska celiyo dhalashada Sweden, maxaa ku kalifay? | Gaaloos.com
Home » Layaab » Wiil doonaya in uu iska celiyo dhalashada Sweden, maxaa ku kalifay?
Iyadoo aan wada ognahay dhibaatada loo maro qaadashada dhalashada Sweden iyo mudada dheer ee la sugo, ayay cajiib tahay in qof dhibkaas u soo maray uu ku dhawaaqo in uu iska celinayo baasaboorka. Sidaa waxaa hadda ka dhawaajiyay wiil lagu magacaabo Kevin Pedral oo ka soo jeeda wadanka Kongo.
Kevin oo Sweden soo galay 1998 ayaa sheegay in uu sameeyay dadaalka kasta oo uu kaga midnoqon karo bulshada Sweden. Waxa uu dhameeyay iskuulka, oo waxa uu shaqooyin badan ka raadsaday shirkadaha. Waxa uu sheegay in markasta uu shaqo raadsado la siiyo shaqooyin hoose oo micno daro ah , iyadoo dhowr bilood ka dibna loo sheegay in uusan si fiican ula qabsan shaqada oo la fasaxo, halka dhalinyarada cadaanka ah oo isku mar soo galeen shaqada la siiyo shaqo rasmi ah isla markaana mushaarkooda uu labo jibaar ka badan yahay kiisa.
Kevin ayaa wargeyska Expressen ku qoray in ka dib markii uu qiimeeyay xaalada Sweden in uu dareemay halka ay la egtahay cunsuriyada ka dhanka ah dadka madoow (Afrofobi) taasoo uu sheegay hadda darteed in uu ka fikarayo in uu iska celiyo baasaboorka Sweden oo dib u dalbado midkii Kongo.
Waxa uu intaasi ku daray in haddii aad dhaliisho Sweden laguu sheegayo in aad tahay jisaar madoow oo xanaaqsan.
Sidee kula tahay fikrada wiilkaan? Cunsuriyada darteed ma isaga celin lahayd baasaboorka oo aad muddo dheer sugaysay? Ku darso fikradaada.
Title: Wiil doonaya in uu iska celiyo dhalashada Sweden, maxaa ku kalifay?